ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်များ | e-commerce သတင်း
Encarni Arcoya | 16/04/2022 10:06 | အီးကောမတ်စ
သင့်မှာ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိရင်၊ မှတ်သားထားရမည့် အရေးကြီးဆုံးအချက်များ ငွေပေးချေမှုတံခါးများ. အထူးသဖြင့်၊ သင့်ဖောက်သည်များ သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် သူတို့ငွေပေးချေနိုင်စေရန်အတွက် အထောက်အကူပစ္စည်းများကို ပေးဆောင်ပါ။ ၎င်းတို့အား လျှော့စျေးများ၊ ဘောနပ်စ်များနှင့် အရစ်ကျပေးချေမှုများကို ပေးဆောင်ခြင်းအား ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့လိုချင်သည့်အရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ကွဲပြားသောငွေပေးချေမှုပုံစံများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ငွေပေးချေမှု တံခါးပေါက် အမျိုးအစားများ။
အကြိမ်များစွာ၊ တွန်းလှည်းများကို လမ်းတစ်ဝက်တွင် ချန်ထားခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ သုံးစွဲသူများ ကုန်ဆုံးလုနီးပါးဖြစ်ပြီး၊ ငွေပေးချေသည့်အခါတွင်၊ ၎င်းတို့အား ပေးထားသည့် ရွေးချယ်စရာများက ၎င်းတို့အား မယုံကြည်နိုင်ဘဲ အခြားစတိုးဆိုင်သို့ သွားလိုကြသောကြောင့်ပင်၊ ၎င်းတို့တွင် ပိုသင့်လျော်သော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းရှိသောကြောင့် သင်ကမ်းလှမ်းသောအရာအတွက် အနည်းငယ်ပိုပေးချေပါ။ အပြင်မှာ ဘာတွေရှိလဲ ဆိုတာကို မစဉ်းစားဘဲနဲ့။
1 ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ဆိုတာ ဘာလဲ။
2 eCommerce သည် အဘယ်ကြောင့် ငွေပေးချေမှုတံခါးများကို အသုံးပြုသင့်သနည်း။
4.2 အမေဇုံ Pay ကို
4.5 Apple Pay ကို
ငွေပေးချေမှု တံခါးပေါက် အမျိုးအစားများအကြောင်း မပြောမီ၊ ဤအသုံးအနှုန်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုလိုရင်းကို အတိအကျ သိထားသင့်ပါသည်။
ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ဆိုတာ တကယ်တော့ ငွေပေးချေမှုကို ခွင့်ပြုရန် နည်းလမ်းတစ်ခု. ဤနည်းအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့၏ငွေပေးချေမှုနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ကုန်သွယ်မှု အရောင်းအ၀ယ်သည် မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း အဆိုပါအသုံးပြုသူကို သင်အာမခံမည်ဖြစ်သည်။
အကြိမ်တိုင်း တွက်ကြည့်လျှင် လူပိုသုံးတယ်။ Credit Card ကိုနှင့် ၎င်းကို အွန်လိုင်းတွင် အသုံးပြုရန် တုံ့ဆိုင်းမှုနည်းပါးကြောင်း၊ သင်၏ eCommerce တွင် သင်လုပ်ဆောင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ အကာအကွယ်ပေးသည်။ ထိုငွေပေးချေမှုတံခါးများမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို "ယုံကြည်" စေရန်၊ သင့်အား အန္တရာယ်မဖြစ်စေမည့်အရာတစ်ခုကို သင်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သင်သိစေရန်။
eCommerce သည် အဘယ်ကြောင့် ငွေပေးချေမှုတံခါးများကို အသုံးပြုသင့်သနည်း။
သင်၏ eCommerce ၎င်းသည် 24 နာရီစတိုးဆိုင်ဖြစ်သည်။. သူတို့က မနက် ၃ နာရီကနေ နေ့လည် ၃ နာရီမှာ အတူတူဝယ်နိုင်ပြီး အဲဒါက သင့်လျော်တဲ့ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေကို ပေးဆောင်ပြီး စီးပွားဖြစ်ဆက်ဆံရေးကို အာမခံချက်ပေးတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
လုံခြုံသော ငွေပေးငွေယူကို သင်ကမ်းလှမ်းသောအခါတွင်၊ သင်အသုံးပြုသူများကို သင်ညွှန်ပြသည်မှာ ၎င်းတို့၏ဝယ်ယူမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ငွေပေးချေမှုကို "လုံခြုံစေရန်" ဖြစ်နိုင်သည့် အာမခံချက်အားလုံးကို သင်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ဤငွေပေးချေမှုများ၏ တရားဝင်မှုကို အမြဲလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုက်ရိုက်. ပြန်ရမယ်ဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ။
သင့်အတွက် စိတ်ကူးကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေရန်၊ အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်တစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စတင်ခဲ့ပြီး၊ သူစိတ်ဝင်စားသည့် ထုတ်ကုန်များကို မြင်ကာ လှည်းထဲသို့ ထည့်ကာ ဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငွေပေးချေမှုအပိုင်းကို ရောက်တဲ့အခါ၊ ၎င်းတို့ကို သင်ကမ်းလှမ်းသော ငွေပေးချေမှုတံခါးကို ရွေးချယ်ပါ။.
အဲဒီအခါမှာ သင့်ကုမ္ပဏီက ဝဘ်စာမျက်နှာကို အသုံးပြုပြီး၊ ဖောက်သည်အချက်အလက်အားလုံးကို လွှဲပြောင်းပါ။ (မင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်အတိုင်း) ထိုငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ဆီသို့ ဒါမှ သင်လိုချင်တဲ့နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘဏ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်တယ်။ ဒေတာကို စနစ်နှစ်မျိုးဖြင့် စာဝှက်ခြင်းကို သင်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် SSL ကို o TLS.
ငွေလွှဲခြင်းကို ဘဏ်မှ အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ အဲဒီအချက်အလက်တွေကို အရောင်းကုမ္ပဏီထံ ပေးပို့ပါတယ်။, ဝဘ်ပေါ်ရှိပြီးသားဒေတာမှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး ဝယ်ယူမှုကို ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
အခု တစ်ချိန်က ကုမ္ပဏီရဲ့ ဘဏ်က အတည်ပြု၊ ငွေပေးငွေယူကိုလည်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရန် သုံးစွဲသူ၏ဘဏ်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။. နှစ်ခုလုံးကို အတည်ပြုပါက၊ သင်သည် ငွေပေးချေမှုသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွားပါမည်။
အကောင်းဆုံးကတော့၊ ဒါက စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အမြဲတမ်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ယခုတွင် ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်များသည် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ပုံကို သင့်အား ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် တည်ရှိနေသောအမျိုးအစားအားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် သိခြင်းမဟုတ်သော်လည်း များစွာရှိပါသည်။ အချို့မှာ စပိန်တွင် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။
Paypal သည် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သော်လည်း အထိရောက်ဆုံး တံခါးပေါက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေပေးချေရန် သုံးစွဲသူသည် ၎င်း၏ဘဏ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်မှတဆင့်.
တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာက eCommerce အားလုံးက မသုံးပါဘူး။ အချို့ပင် ငွေပေးချေမှုစျေးနှုန်းကိုတိုးမြှင့် ၎င်းတို့ကို ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက် PayPal မှ ကောက်ခံသည့် ကော်မရှင်နှင့် ၎င်းတို့အား ကောက်ခံခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်။
၎င်းသည် လအနည်းငယ် သို့မဟုတ် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း စပိန်တွင် ၎င်းသည် လူသိအများဆုံးတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ သင်၏ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းသည် အလုံခြုံဆုံးထဲကတစ်ခု ငွေပေးချေမှုများသည် အလွန်လုံခြုံသည်၊ ထို့အပြင် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ ၎င်းနှင့်ပေးချေနိုင်စေရန် Amazon သို့ ဝင်ရောက်ပါ။
eCommerce အတွက်၊ ဤနည်းလမ်းကို ပို၍ပို၍ဖွင့်လာကြပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ပုံသေငွေပေးချေမှုပလပ်ဖောင်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် တဖြည်းဖြည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ဆောင်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့ အံ့သြမည်မဟုတ်ပါ။
စပိန်မှာ နာမည်ကြီးတယ်။ စပိန်နွယ်ဖွားဖြစ်ပြီး၊ အသုံးအများဆုံးထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များထဲတွင်၊ ၎င်းကို နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတကာ အကြွေးဝယ်ကတ်များနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ Visa နှင့် Mastercard နှင့် အောင်လက်မှတ်များရှိသည်။ လျှောက်ထားရန် အလွယ်ကူဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ဤငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သည် သင့်ကိုခွင့်ပြုသည်။ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ပေးဆောင်ပါ။. ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီး၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အခြားသူများနှင့်မတူဘဲ၊ SSL လက်မှတ်ရှိရန် သို့မဟုတ် ၎င်းသည် PCI နှင့် ကိုက်ညီရန် ဝဘ်ဆိုက်ကို မလိုအပ်ပါ။ အသုံးပြုရန်
ထို့အပြင်၊ အရာအားလုံးသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး အချိန်ဖြုန်းခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ဘဏ်စာရင်းများမှ ရန်ပုံငွေများကို လွှဲပြောင်းပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
Apple အသုံးပြုသူများအတွက်၊ ၎င်းသည် ငွေပေးချေမှုများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါက ဒီ catwalk ပါ။ Face ID နှင့် Touch ID ကိုသုံးပါ။ ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပေးရန်။
ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်လုပ်ငန်းမှာ သင့်တွင် NFC ပါသော terminal တစ်ခုရှိရမည်။မဟုတ်ပါက ပေးချေရန် ၎င်းကို သင်အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ လုပ်ငန်းတော်တော်များများက ဒါကို သတိမပြုမိသေးပေမယ့် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ လုံခြုံရေးက အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် လူသိများသောကတ်အများစုကို ကလစ်ဖြင့် ကလစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင့်တွင် တစ်ခုတည်းသော ပြဿနာမှာ ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ 7-14 ရက်ကြာနိုင်သည်။SMEs နှင့် အလွတ်သတင်းထောက်များအတွက်၊ ၎င်းသည် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေ။
Square၊ MercadoPago၊ PayPro Global၊ FONDY၊ Swipe သို့မဟုတ် Payment Sense ကဲ့သို့သော အခြားသော ပလပ်ဖောင်းများသည်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ငွေပေးချေမှု တံခါးပေါက် အမျိုးအစားများ ဥပမာများ ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ထဲက အကောင်းဆုံးလား။ ၎င်းသည် သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့် သင်၏ eCommerce အတွက် လိုအပ်သည့်အရာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ သင့်ဖောက်သည်များအတွက် အမျိုးမျိုးသော အာမခံချက် အများအပြားကို တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရာအားလုံးက မင်းအတွက် ရှင်းနေသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ECommerce သတင်း » အီးကောမတ်စ » ငွေပေးချေမှုတံခါးအမျိုးအစားများ